Momba anay | Hebei Forrest Trading Co., Ltd.
Hebei Forrest Casting Company Matihanina amin'ny lakozia vy ary paompy mihoatra ny 20 taona. Ny tsipika vokatra dia vy vy, ao anatin'izany ny fitaovana fandrahoana vy, ny vy fanaovana vy, ny vy vy. Mampihatra mafy ny rafitra fanaraha-maso kalitao Iso9001 izahay. Manana ny orinasa izahay ao amin'ny faritanin'i Hebei sy Yunnan.
Manana ekipa mpamorona manokana izahay, ka tongasoa ireo singa namboarina.
Ny tsenanay dia efa niitatra nanerana an'izao tontolo izao nandritra ny taona maro, mpanjifa Amerika, Eropa, Japon, Aostralia sns., Nanaiky ny kalitao avo lenta, manana fifandraisana tsara. Toy ny Gipfel any Russia, Kohnan Shoji Co., Ltd. any Japon, Homekit any Danemark.
Miaraka amin'ny tombotsoan'ny mpiasa, azo antoka ny fanaraha-maso Quatliy sy ny fandefasana azy.
Ny entana rehetra amin'ny LFGB, FDA, CA65Test fankatoavana.
Manantena izahay fa hiara-hiasa amin'ireo mpanjifa maro kokoa ho an'ny fampandrosoana sy ny tombontsoa azo avy.
Tongasoa ireo mpividy mety hifandray aminay.